Orinasa vita pirinty vita amin'ny plastika vita amin'ny pirinty China ary mpanamboatra | Hong Bang
HONGBANG dia nizara vokatra vita an-tsarimihetsika vita amin'ny plastika vita amin'ny horonam-pirinty ho an'ny mpanjifa eran'i Eropa sy Amerika nandritra ny 20 taona. Manome karazany maro karazana sarimihetsika vita amin'ny plastika misy sakana izy io. Ny ankamaroan'ny vokatra horonantsary dia ampiasaina amin'ny fampiharana fonosana sakafo ary ny sisa dia mandeha amin'ny fampiharana manokana.
Izahay dia manome vahaolana ho an'ny fampiharana sarimihetsika sarimihetsika sakana. Ny isan'ny configurations mety ho an'ny sarimihetsika misy sosona marobe dia tsy manam-petra. Na mila fonosana ho an'ny marika sakafo mangatsiaka ianao, na ho an'ny sakafo mafana efa voavoatra dia afaka manome anao vahaolana mety. Azontsika atao ny mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fananana sakana indrindra amin'ny hafanana, hazavana, Oxygène ary rivotra, hamandoana ary vovoka.
Ny sarimihetsika misy sakana dia misy ny CPP, PET, EVOH, PP metaly, foil, TOPP, VMPET. Ho an'ny fepetra manokana, toy ny fonosana mandeha ho azy, manome sarimihetsika fanamafisam-peo sy thermoforming izahay. Ny sarimihetsika Nylon / PE 7 sosona dia nanjary mpitarika vidiny tany Eropa sy Amerika na ny sarimihetsika sakana dia nankatoavin'ny FDA.
Endri-javatra sy safidy
Coex sy laminated sakana horonan-taratasy
Horonan-tsarimihetsika ambany ambany
Horonan-taratasy azo ovaina
Ny sarimihetsika Roll dia famolavolana manokana ho an'ny tsipika fananganana orinasa. Azontsika atao ny manamboatra ny fototry ny sarimihetsika amin'ny zavatra takinao, mety ho foil aluminium, sarimihetsika BOPA / NYLON, horonantsary ALOX, sarimihetsika SIOX, Polyester, BOPP sns. .
Fiarovana sy kalitao avo lenta
no ho fitsipika voalohany ho antsika. Ny vokatray rehetra dia vita amin'ny akora ara-tsakafo izay midika fa ny sarimihetsika ampiasainay, ny ranomainty ary ny tsipika famokarana dia fiarovana 100% ho an'ny ankizy lehibe na kely aza. Ankoatr'izay, henjana izahay amin'ny kalitao izay midika fandeferana aotra amin'ny endrika marimaritra iraisana izay mampiseho amin'ny fananganana matanjaka, ny fahateren'ny rivotra ary ny fanontana mazava. Ny fametahana lalao marefo sy lavorary miaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa dia ho tanjontsika hatrany.
Izahay dia manome vahaolana ho an'ny sarimihetsika sarimihetsika sakana marobe. Lazao anay ny zavatra takianay fa ho hitanay ny filanareo rehetra. Tsy mamokatra vokatra izahay ary manandrana mitarika anao hanaraka azy ireo; mihaino ny filanao sy ny fanavaozana injeniera izahay izay hamaha ny olanao amin'ny fonosana.
Manana ekipa serivisy ho an'ny mpanjifa matihanina izahay hamaly sy hamaha ny fanontaniana ao anatin'ny 24 ora. Ny tranga tsirairay dia hanana olona manokana hiantohana ny famolavolana, ny habetsany, ny kalitao ary ny datin'ny fandefasana azy dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana. Tianay ny manome serivisy tsara indrindra ary manome ny mpanohana anay indrindra.
Teo aloha: Kitapo ambany vita amin'ny Kraft Paper Flat
Manaraka: Fanontana horonantsary vita amin'ny plastika vita pirinty ho an'ny famonosana Auto
Kitapo plastika kafe
Fonosana harona plastika
Tombo-kase Vacuum sakafo 10 ″ X 50′- 2 ...
Kitapo farany ambany
Kraft Paper Mitsangàna paosy